Ivenkile yeeNkonzo zabaThengi | Uhlobo Rave
Ivenkile yeeNkonzo zabaThengi
Imibuzo ngokubanzi: Mthumelele nge-imeyile shop@stylerave.com. Ngoncedo olukhawulezileyo, ucofe + 1.516.806.0803
Returns: Onke amabango, kubandakanya ukutshintshiselana kunye nokuthenga ngetyala, kufuneka kuqalwe kwiintsuku ezintathu (3) emva kokuba zifunyenwe iimpahla. Nceda unxibelelane nathi nge-imeyile apha shop@stylerave.com inombolo ye-Return Authorisation (RA) kunye neminye imiyalelo, njengoko izinto aziyi kwamkelwa ngaphandle kogunyaziso lwangaphambili.
Sinikezela ngetyala levenkile yezinto ezibuyisiweyo kwaye iimali ezibuyiselweyo azivumelekile kuthumelo nasekuphatheni iifizi.
Zonke izinto ezamkelweyo ukuba zibuyiselwe mazithunyelwe ngaphakathi kwiintsuku ezimbini (2) zokufumana ukuBuya kweVenkile kwiVenkile yeNdawo yeevenkile.